QISO CAJIIB AH OO AQOON BADAN LAGA KORORSAN KARO! | Salaan Media
QISO CAJIIB AH OO AQOON BADAN LAGA KORORSAN KARO!
Magacayga waxaa la yirahda Cassie, waxaan ahey gabar 23 jir ah oo ka soo Qalinjabisey Iskuulka Kalkaalinta Caafimaadka. Shaqadii iigu Horeysay waxaan ka heley meesha lagu Xanaaneeyo Dadka Waayeelka (Home nurse).Qofkii iigu horeeyey ee la igu Qorey wuxuu ahaa Odey 80 jir ah dalka Ingiriiska u dhashay oo qaba Cudurka ‘Alzheimer’s’. ee xasuusta dadka ay ka lunto ama asaasaqa.
Maalintii iigu horeysay ee aan Shaqada soo galay ayaa la ii Dhiibey Feylka Bukaanka. Haddii aan Isha la raacay waxaa ku qoran inuu Diinta Islaamka galay.
Horey ayaan u Ogaa in Hab Dhaqameedka meesha (Home nurse) qaarkiis uu ka hor imaan doona Diintiisa, sidaas darteed aan u baahanahey inaan Fahmo Waxyaabaha uu u baahan yahay si aan ugu Khidmeeyo sida ugu Wanaagsan.
Odayga wuxuu ahaa Qof ay Xaaladiisa Caafimaad aad u Liidato oo ay Adag tahay in loo Khidmeeyo, Xitaa Saaxibadey ayaa ila yaabi jirey sida aan ugu Dadaalayo Qof ay Xaaladiisu sidaan tahay, oo hadana sita Diin Qariib ah, Anigase waxaan u Arkaayey Qof Diintiisa Daacad u ah oo u baahan in la Ixtiraamo. Si kastaba ahaatee, Dhowr Usbuuc haddii aan la joogey waxay Indhahayga ku dhaceen isagoo samaynaya Xarakaat isu Eg.
Ugu horeyntii waxaan u qaatay inuu arkay Qof kale oo uu ku Dayanaayo, laakiinse waxaa ii Muuqatay inuu ku soo Celcelinayo Waqtiyo gooni ah sida Subaxa, Galabka iyo Fiidka. Waa Xarakaat Gacmaha kor loo Taagaayo, Foorarsi, Madaxa oo Dhulka la Dhigo iyo kuwa kale oo aan Fahmi waayey waxa ay ka Dhigan yihiin. Wuxuu ahaa mid Akhriyo Jumlada aan Fahmi waayey Luuqada ay yihiin in kasta aan si Fiican u Hadli Karin markiisa horaba Xanuunka dartiis. Wuxuu ahaa mid iga diido inaan Gacanta Bidix ku Quudiyo in kasta oo aan ahaa Qof Guran, Malaha waa Arrin Diintiisa Salka ku haysa oo aan weli Fahmin Sababta.
Goor aan isla Wareersanahay ayaa Qof aanu Saaxibo aheyn ii sheegey inuu jiro Aaalada Paltalk ee lagaga dooddo Arimaha Diinta oo laga yaabo inay iga Jaahil bixiyaan Waxyaabaha uu Samaynayo iyo sida aan ula Macaamuli lahaa. Waxaan is iri malaha waa Fikrad Wanaagsan inaad Musliminta waydisid Ficilkan.
Haddaba, waxaan galay Qol la yirahdo ‘True Message’ Fariinta Runta ah, Halkii ayaan Dadka ku weydiiyey Su’aalo ku saabsan wixii aan ku arkay Bukaanka, waxaana la ii sheegey inay tahay sida loo Tukado Salaada. Ma rumaysan Jawaabtii laga bixiyey ilaa uu Qof kale soo galiyey you tubeka ‘islamic prayer’ Allaahu Akbar, Yaab iyo Amakaag ayuu Allaah ii keeney, Qof ay ka Dhuntey Xusuusta oo dhan xitaa Caruurtiisa ‘Magacyadooda’ oo Cunitaanka iyo Cabitaanka uu dhib ku yahay ayaa weli sii Xasuusta Salaada iyo sida loo Tukado! Kaaga Daranka, xitaa Qur’aankii ayuu sii Xasuusta oo ku qoran Luuqad kale oo aanu u Dhalan. Waxay igu noqotay waxaan qaadan waayey, waxaana ii Cadaatay inuu Daacad ka yahay Diintiisa, taas oo igu Dhalisay inaan Barto Diintiisa si aan ugu Khidmeeyo sida ugu Wanaagsan.
Waxaan Caado ka dhigtay inaan Maalin kasta soo galo Paltalga. Waxaa la i siiyey Linka- meel aan ka Aqrin karo Qur’aanka Turjumadiisa iyo Dhagaysi intaba. Waxaan aad ugu heley Suuratu Annaxal (Shinida) oo aan Maalintii Dhowr jeer Dhageysan jirey, Waxaana Go’aansaday inaan Qur’aanka wax ka gaarsiiyo Odayga Bukaanka. Qur’aanka ayaan ku soo Duubey IP Odgayga kadibna u geeyey si uu u Dhagaysto.
Cajiib, Qur’anka marka uu Dhagaysto, marna wuu Ooya, marna wuu Dhoola Cadeeya! Anigoo yaaban sida ay wax ka yihiin ayaan Fiiriyey Tarjumada Aayadaha markaas ayaan Fahmay Sababta. Wuxuu ahaa mid Ooya marka uu Maqlo Aayadaha Cadaabka ka sheekeynaya, wuxuuna Farxaa marka laga Sheekeynayo Jannada.
Waxaan isku dayey inaan ku Dhaqmo wixii aan ka Bartay paltalga, hase yeeshe waxaan is arkay anigoo Naftayda is waydinayo Su’aalo aan weligey Jaanis u helin inaan is weydiyo sida Aabahay iyo meesha uu ku Danbeeyey, Hooyadey waxay Dhimatay Anigoo 3 jir ah. Aniga iyo Walaalkey waxaa na soo koriyey Awoowgeen iyo Ayeydeen oo iminka sii mootan 4 sano. Waxaa hadda Ifka ku nool Aniga iyo Walaalkey oo kaliya. Waxaas oo dhibaato oo i soo gaartey waxaan hadana u haystaa inaan faraxsanahay!
Joogitaanka aan la joogey bukaankan ayaan dareemey in ay wax iga maqanyihiin. Waxaan qalad u fahmay waxa uu yahay xasiloonida iyo daganaanta (peace and tranquillity).
Gabar aan ka bartay Paltalk ayaa i siisey Magacyada Masaajidyada ku yaala meesha aan Daganahay, waxaana Booqdey mid ka mid ah. Waxaan Daawadey sida Salaada loo Tukado, Indhahaygana waxaa ku soo Istaagi jirey Ilmo! Masjidka ayaa Naftayda la Jeclaysiiyey.
Iimaanka iyo Xaaskiisa ayaa aad i soo Dhaweeyeen oo i siiyey Cajalado iyo Buugaag aan ka Faa’idaysto, ayagoo weliba iiga jawaabi jirey wixii Su’aalo ah oo aan Qabo.
Dadkii aan ka bartay Paltalkga, Su’aal kasta oo aan weydiiyo si Sahlan oo Cajiib ah ayey iigu jawaabaan oo ay Qasab igu noqotay inaan Aqbalo.
Horey wax Diin ah oo aan Aamisanaa ma jirin, laakiinse Had iyo jeer waxaan Rumaysnaa inuu jiro ILLAAHAY SUBXAANA WATACAALAA walow aanan Garaneyn sidii aan u Caabudi lahaa.
SU’AAL AAN JAWAAB U WAAYEY.
Galab galbaha ka mid ah ayaan soo galay Paltalk, Qolkii (the True religion). Midkood ayaa Microphoneka qabsadey isagoo i weydinaya inaan wax Su’aal ah qabo. Maya ayaan ugu jawaabay. Waxaa kale oo uu i weydiyey inaan ku Qanacsahay jawaabihii laga bixiyey Su’aalihii aan dadka waydiiyey. Waxaan u sheegey inaan ku Qancay!
(Maxaay tahay waxa kaa Hortaagan inaad Islaamka soo gashid?), Ayuu i weydiiyey! Waxaan ku jawaabo ayaan Garan waayey. Waxaan dib ugu laabtay Odaygii Bukaanka ahaa. Indhihiisa ayaan Eegey Anigoo Quudinaaya, waxaan Yaqiinsadey in la ii soo direy oo ay meeshan Arrin ka socoto. Runtii, Su’aasha uu Ninka i weydiiyey waxa iga hortaagan waa Cabsi. ma ahan Cabsi in ay wax igu Dhacayaan, ee waxaan ka Baqayaa Runta !
Galabtaas ayaan Go’aansadey inaan ku Dhawaaqo Shahaadada. Imaamka Masjidka ayaa ii qabtay Shahaadada kadib markii uu ii Sharaxay waxa la iga Baahan yahay.
Masharaxi karo sida uu Dareenkeyga ahaa markii aan ku Dhawaaqay Kalmadaas. Waxay ila aheyd sida iyada oo Qof Hurdada iga soo kiciyey oo Indhaha si aan Caadi aheyn wax ku eegayo. Qofkii u horeeyey ee aan u sheegey wuxuu ahaa Walaalkey Ama Bukaankii. markaan u soo galay Anigoon Afka kala qaadin ayuu isku daray Dhoola cadeyn iyo Ilmo, ka dibna hortiisa ayaan kula dhacay Farxad iyo Oohin. wuxuu igu leeyahay Fadli aan la soo koobi karin, Allaah haka ka Abaal mariyo.
Qolkii Paltalk ayaan ku soo noqday Anigoo ku Celcelinaya Shahaadada si ay iila Wadaagaan. Waxay aheyd Maalin Farxad badan oo Noolasha is badashay, Inkasta oo aan midkoodna Arag, waxaan Dareemey in ay iiga Dhow yihiin Walaalkey. Dhamaantood waxay igu leeyihiin Abaal aan la soo koobi Karin.
Ugu danbayntii walaalkey ayaan Telephone u direy Anigoo u Sharxay Diinta aan galay. Inkasta oo aanu ku Farxin, hadana wuxuu ii Balanqaaday inuu i Garab istaagayo.
Usbuuc kadib markii aan Diinta Islaamka soo galay waxaa Dhintey Odaygii, isagoo jiifa oo aan Dul taaganahay ayay Nafta ka baxday (Innaa Lillaah wa innaa Ilayhi Raajicuun), Wuxuu u Dhintey si Dhib yar oo ay ku jirta Raxmad, Anigana waxaan ahaa Qof kale ee la joogey goorta uu Ifka ka tagay. Wuxuu ii ahaa sida Aabahaygii aan waligay Arag, wuxuu ahaa Wadadii aan Islaamka ka soo galay, laga soo bilaabo Maalintii aan Shahaadada ku Dhawaaqay ilaa Maanta iyo inta aan Noolahay waan u Ducaynayaa inuu Allah ka Abaalmariyo Camal kasta oo aan Sameeyo.
Dadow, Islaamka waa Diintii Ilaahay oo Albaabkeeda u Furan yahay cid kasta oo doonayso. Allah waa Raxmad badan yahay, wuuna Naxariistaa.
Walaasheen Cassie, iyadana waxay dhimatay Bishii October Sannadkii 2010-kii kadib markii ay Islaamka ugu yeertey Walaalkeed oo uu soo Islaamay.
(ILAAHOOW INTII BAADIYEESAN SOO HANUUNI, YAA RABBI).
Fadlan walaal adigoo mahadsan Share dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u aqriyaan qisadan